नेपाल आज | चिनियाँले किलोमै पाँच लाख मूल्य घटाएपछि अर्बको यार्सागुम्बा अलपत्र
व्यापार अर्थ प्रदेश ७
चिनियाँले किलोमै पाँच लाख मूल्य घटाएपछि अर्बको यार्सागुम्बा अलपत्र
शुक्रबार, १८ माघ २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
बझाङ । चिनियाँ व्यापारीले किलोमै पाँच लाख मूल्य घटाएपछि बझाङका व्यापारीको यार्सागुम्बा बिक्री भएको छैन। बझाङमा संकलन भएको यार्सा किनेर उनीहरू काठमाडौंमा चिनियाँ व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गर्छन्। बझाङमा प्रतिकिलो १५ लाखदेखि १६ लाख परेको यार्सालाई चिनियाँ व्यापारीहरूले १२ लाखमा मात्रै किन्ने भनेपछि नेपाली व्यापारीले बिक्री नगरेका हुन्।
सुर्मा गाँउपालिका दौलीचौरका यार्सा व्यापारी उमेश बोहराले काठमाडौं पुर्‍याएको १५ किलो यार्सा मूल्य घटेकाले बिक्री हुन नसकेको बताए। ‘मैले जिल्लामै प्रतिकिलो १७ देखि २० लाखका दरले खरिद गरेर काठमाडौं लगेको हुँ तर अहिले चिनियाँ व्यापारीहरूले १२ लाखमा मात्रै किन्ने भनेपछि चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने। उनको झण्डै तीन करोडको यार्सा काठमाडौंमै थन्किएको छ।
बझाङका यार्सा व्यापारी महिमान तामाङ, पुलचुङ तामाङलगायतका दर्जनौं व्यापारीहरू काठमाडौंमा यार्साको भाउ नमिलेपछि यस वर्ष नराम्ररी घाटा हुने भन्दै निराश छन्। यार्सा बहुमूल्य भएकाले उनीहरूले संकलनका बेला पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर संकलन गर्छन् भने हेलिकप्टरमै काठमाडौं पुर्‍याँउछन्। बोहराले यसपालि बझाङबाट संकलन भएको साढे तीन क्वीन्टल यार्सागुम्बा काठमाडौंमा बिक्री नभएर थन्किएको बताए।
साईपाल गाउँपालिका काडाका यार्सा संकलक सिद्धु बोहराले यार्सा लगेका व्यापारीले पैसा अहिलेसम्म नदिएको बताएका छन्। ‘कतिपय व्यापारीले नगद दिएर यार्सा खरिद गरेका थिए, कतिले काठमाडौं बिक्री भएपछि दिन्छु भनेर लगेका हुन्, उता पनि बिक्री नभएको सुनिएको छ,’ उनले भने। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।
नेपाल आयल निगमका उप प्रबन्धकसहित सात जना पक्राउ
चिनिया कम्पनीले नेपाली हजारका ३१ करोड थान नोट छाप्ने !
घट्यो सुनको, मुल्य कति पुग्यो ! हेर्नुहोस